UNEIL OSELULA / IHASHE ELIHLANYAYO: PHILA KWIFILLMORE EAST ALBUM REVIEW - IINDABA
Hlala kwiFillmore East
Igama elithi 'umculi wedwa' lelona gama lixhaphakileyo kwimbali yamatye, isithuko kwabaninzi abacinezelweyo nabathe cwaka emva kwekhethini lomdlalo ngamnye. Ndithetha ngabasekeli, amaqela axhasayo, abavelisi, abamagama abo aziwa kuphela kwabona banenzondelelo abaphengululi bemikhono kunye nababhali bebhayoloji, kwaye ukubaluleka kwabo kuyaziwa kunqabile. U-Elvis Presley wayenoScotty Moore kunye noSam Phillips, uBob Dylan wayenoAl Kooper kunye noBob Johnston, uDavid Bowie wayenoBrian Eno noMick Ronson, onke la malungu adibeneyo esandi esenza ukuba wonke umntu adume, kodwa awunakuze ubabaze imarque ecaleni kwenkwenkwezi ebonisiweyo. .
Ngaphezulu kwekhondo lakhe lomsebenzi, uNeil Young uye waqhuba kuyo yonke i-wardrobe yezazisi, nganye nganye ineqela layo elixhasayo elixhasayo: iqaqobana lamatye elizwe kunye noStephen Stills, iirekhodi zakhe zomculo kunye neeseshoni zeNashville kwiQela eliGqwesileyo, ukhenketho kunye neerekhodi ngeBooker T. & MG's kunye nePearl Jam. Kodwa eli qela libuyele kuYoung ngokuphindaphindiweyo mhlawumbi alithandeki, ngokuqinisekileyo alikho elidumileyo, kwaye ngokuqinisekileyo ayililo eliphambili kwezobuchwephesha. Ukusukela ngonyaka we-1969, iCrazy Horse ibeyinjini esetyenzisiweyo ethe yanezona zinto zibalulekileyo kuYoung, kwaye ubabuyisile ngohlobo lwentlawulo elinganayo engafunyanwa ngabantu abangafunwayo.
Ubungqina buchazwe kwiqweqwe lika Hlala kwiFillmore East , apho u-Young enze i-putter-upper ye-putter-upper ukuba enze umsebenzi owongezelelweyo wokupela igama leqela lakhe elixhasayo ecaleni kwelakhe. Ngelo xesha, u-Young wayevela kwirekhodi elinempambano kunye nohambo kunye noCrosby, uStills noNash, kodwa wabakhuphela ecaleni ukuze badlale imiboniso neqela elalimxhasile kwisiteyitimenti sakhe solo Wonke umntu uyazi ukuba akukho ndawo : UDanny Whitten, uBilly Talbot, kunye noRalph Molina. Ayaziwa, ayipheliswanga, kwaye ayinatalente (ngokutsho kwabanye), i-Crazy Horse yayiyinto egqibeleleyo ye-CSN epholileyo kunye nefashoni, kodwa zanceda u-Young ukuba afezekise umbono wakhe we-garage-rock ngokucacileyo ngakumbi kunokunxaxha okungathandekiyo kweqela elalihlanganisene nomzi mveliso. .
Isikolo seentsimbi ezisixhenxe - sviib
Okumangalisayo kukuba, ngenxa yokungabikho kobuchule bobuchwephesha obuqhelekileyo beCrazy Horse, le miboniso yango-1970 yenzeka ngelo xesha kwimbali yamatye xa uhlengahlengiso lwaluxatyiswa phantse kwinqanaba lokuba yimfuneko. IFillmore uqobo yayiyindawo enxulunyaniswa ngokusondeleyo neeseshoni zejam yeebhanti ezinje nge-Grateful Dead kunye ne-Allman Brothers, kunye novavanyo lukaMiles Davis lokudibanisa okunene babelana ngetyala kunye neHashe eliLutsha kunye neCrazy. Igalelo lomncinci kulo mkhwa yayingamawele akhe amawele athi 'Down By the River' kunye 'neCowgirl eSand', nganye ineentlambo ezinkulu zesithuba esivulekileyo phakathi kwamaxesha amafutshane abhaliweyo eevesi kunye nekwayara. Olu khululo lulawulwa zezi ngoma zimbini, zombini zidlulileyo kumanqaku emizuzu eli-10 ngaphandle kokukhula, imiboniso egqibeleleyo yekhemistri phakathi kwabaphambili kunye nabaxhasi. Icandelo lesingqisho likaTalbot noMolina alinangxaki okanye liyakhazimla, kodwa idayinaso yabo inesiphatho esaneleyo sokunika ibhendi uhlobo olothusayo, isiseko apho uDanny Whitten kunye noNeil Young benza khona incoko yabo yegitala. Intsomi kaWhitten ibisoloko inamafu, umkhwa wakhe we-heroin ucime italente yakhe edunyiswayo kwaye, ekugqibeleni, ubomi bakhe kanye njengeCrazy Horse baqala ukuzenzela igama, kodwa kubonisiwe ngokupheleleyo apha, iinxalenye zesingqisho zakhe ezihlala zidibana kunye undwendwe lukaJack Nitzsche lwepiyano yombane yokuhambisa ukuhamba kwamacandelo e-jam, enika ulutsha indawo eninzi yokubeka phantsi indlela yakhe ebuhlungu nenomsindo.
Phakathi kwale midlalo mikhulu, ezinye iingoma ezisetiweyo ziphantse zafana nokuqhekeka komsi, iziqwenga ezimfutshane ezisuka entliziyweni, ezigugileyo zoLutsha ezikhethekileyo Emva kweGoldrush . Ubunqabileyo obunxulumene 'noWinterlong' bubuncwane bezi ngoma zimfutshane, enye yeengoma ezimnandi kakhulu kwirejista yombane kaYoung, ene-aura yothando eyenziwe ngandlel 'ithile inyanisekileyo yimikhwa eyaphukileyo. 'Yiza Mntwana Masihambe siye eDowntown' kukukhanya kweHashe, iWhite ebonisa ukuba ngokuqinisekileyo wayengcono, okanye ubuncinci ngokwesiqhelo rock'n'roll, imvumi kunomphathi wakhe- isikhumbuzo sokuba ucula indawo ephambili ' ICinnamon Girl ', eyona radio inkulu yombane yentsimbi.
jay z 444 ividiyo
Ukanti njengokukhutshwa kokuqala kokucocwa kwexesha elide koovimba abanzi bakaYoung, ifomathi ye- Hlala kwiFillmore East yehla ngokuzithoba, ukhetha kuphela izinto eziqaqambileyo ezivela kubusuku beebhendi ezimbini / kwimiboniso emine kunokubonelela ngokuseta, okungafinyezwanga. Kwibhendi enobukrelekrele obuvela kukungafezeki kunye neempazamo ezibonisa ukungakhathali, kukungavumi ukukhanyela u-Young's rabid fanbase ongalungiswanga ukukhululwa kweetape ekudala zilindelwe; zarekhodwa ngexesha le-albhamu ephilayo eyagqitywa kamva. Kodwa iziqwengana ezimbalwa abazibona zikufanele ukukhululwa kodwa zanele ngokwaneleyo ukuthethelela ubume obudumileyo beentsuku zokuqala zehashe eliCrazy, kwaye ucacise ukuba kwakutheni ukuze kube lula ukubiza abancinci ukuba benze isigqibo esinqabileyo 'somculi oyedwa' sokuphatha abo basebenzisana nabo njengamaqabane alinganayo.
I-albhamu yokuqala yokuqala encinci
I-albhamu ka-lana del rey
ekhokelwa ngamazwi inyikima yenyikima